Alcatel A7 XL, fahatsapana voalohany ao amin'ny IFA 2017 | Androidsis
Alcatel dia tsy nanadino ilay fotoana tao amin'ny fanontana farany an'ny IFA tany Berlin mba hanolotra ny zava-baovao. Ankehitriny, nanakaiky ny toeran'ny mpanamboatra izahay hanome anao ny anay fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny Alcatel A7 XL, phablet misy chiaroscuro maro.
2 Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel A7 XL
El Alcatel A7 XL tsy finday avo lenta io. Zava-misy miharihary amin'ny maso mitanjaka na rehefa mandray telefaona. Raha ny famolavolana dia ho hitanao fa tsy miavaka amin'ny lafiny rehetra izy io, satria iray amin'ny vondrona phablet mora vidy.
Ary toy izany koa no mitranga amin'ny famaranana. Ny telefaona dia misy chassis vita amin'ny polycarbonate ary manandrana maka tahaka ny aluminium. Tsy mandeha aminy ny fikafika satria raha mikasika anao dia hitanao eo no ho eo fa tsy vita amin'ny vy ny vatana fa tokony holazaiko kosa fa mahatsapa tsara eo am-pelatanana ilay terminal ary mandanjalanja tsara ankoatry ny tsy solafaka, zavatra tiako.
Amin'ny ankapobeny dia telefaona tsy misongadina ao amin'ny faritra famolavolana izy io, na dia tsy afaka manantena be loatra amin'ny telefaona an'ity karazana ity aza aho, nanantena aho fa hanandrana kely kokoa i Alcatel toy ny tamin'ny terminal izay naterina tany amin'ny Finday. Kaongresy manerantany 2017.
Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel A7 XL
modely A7 XL
Operating System Android Nougat 7.1 eo ambanin'ny fampiasa mahazatra an'ny mpampiasa HTC Sense
efijery IPS 6 santimetatra 1920 x 1080 teboka
processeur Octa core 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz
GPU TSY FANTATRA
Tahiry anatiny 64GB na 128GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny slot karatra fitadidiana hatramin'ny 256GB
Fakan-tsary aoriana 12 megapixels Sensatera faharoa 2 megapixel - fefy LED taratra roa - horonantsary 1080p amin'ny 30 fps
Fakan-tsary mialoha 5 megapixels interpolation hatramin'ny 8 megapixels - horonantsary 1080p amin'ny 30 fps
Fitaovana hafa sensor sensor / accelerometer / gyroscope
bateria 4.000 Mah hiakatra amin'ny 2:30 ora
lafiny 159 6 X 91 5 X 8 65 MG
Raha ara-teknika dia miresaka a telefaona tena tsotra tsy misongadina amin'ny lafiny rehetra izany fa manana fitaovana maoderina mihoatra ny ampy hahafahana mamindra izay lalao na rindranasa tsy misy olana lehibe.
Ary io no hany teboka miavaka amin'ity Alcatl A7 XL ity dia ny haben'ny efijery, noforonin'i a Panel 6-inch manome vahaolana feno HD ary kalitaon'ny sary tsara, izay mahatonga an'ity telefaona ity safidy mahaliana indrindra raha mila phablet tsotra sy mora izay manana efijery tsara ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Alcatel A7 XL, fahatsapana voalohany tao amin'ny IFA 2017